Go'doomin transformer: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Qalab bilaash ah
Isaac | | Qaybaha elektarooniga ah
Qaybaha elegtarooniga ah ee la falanqeeyay waxaa ka mid ahaa isbadal toroidal, intaa waxa dheer in aanu wax ka qabanay noocyadan oo kale marka aan ka faalloonno sahayda korontada. noocyada hadda jiraiwm. Hadda waa leexashada nooc kale oo aad u gaar ah oo ah transformer, sida transformer ka go'doomin.
Waxaad awoodi kartaa ogow waxa ay tahay, maxaa loogu talagalay, kala duwanaanshaha noocyada kale ee transformers, iyo sidoo kale sida loo doorto mid ka mid ah mashaariicda mustaqbalka.
1 Waa maxay koronto-bixiye go'doon?
1.2 Faa'iidooyinka transformer-ka go'doominta
1.3 Codsiyada beddelka badbaadada
2 Halkee laga iibsan karaa transformer-ka go'doonsan
Waa maxay koronto-bixiye go'doon?
ka Transformers koronto Waxay leeyihiin hantida ku wareejinta tamarta inta u dhaxaysa labadooda ama in ka badan oo dabaylaha kirishbooyada ah iyada oo aanu jirin xidhiidh jireed oo ka dhexeeya. Waxa kaliya ee ka reeban waxay noqon doontaa is beddelka iswada. Si loo soo saaro wareejintan waxay ku salaysan yihiin soo-saarka korantada, iyo guud ahaan wax ka badan ama ka yar ayaa loo adeegsadaa dabaysha si ay u beddelaan korantada.
Taasna waa ku mahadsan tahay go'doominta wareegyadaMaaddaama mid uu ku xiran yahay dabaysha asaasiga ah iyo mid kale oo ku xiran dabaysha labaad, ma aha oo kaliya in calaamadda la bedeli karo, waxay sidoo kale u dhaqmi karaan sida walxaha badbaadada.
Dhab ahaantii, marka aan tixraacno transformer-ka badbaadada ama transformer-ka go'doominta, waxaan kula hadlaynaa transformers aad u gaar ah 1: 1 saamiga, taas oo ah, iyada oo isla dabaysha labadiisa gariirood (lambar isku mid ah), si aanay u beddelin tamarta. Wax soo saarkaagu wuxuu la mid noqon doonaa gelintaada.
Sababtan awgeed waxaa loo isticmaalaa in barnaamijyadooda amniga, marka aad u baahan tahay inaad u gudbiso tamarta korantada hal wareeg ilaa mid kale oo aad rabto in aad kala saarto labadaba.
Gudaha transformers-yada badbaadada, ama go'doominta, waxaad ka heli kartaa laba nooc oo aasaasi ah:
Marxalad keli ah: waxa uu leeyahay shaashad lagu rakibay inta u dhaxaysa dabaylaha hoose iyo kan sare, kaas oo ku xidhan terminal dahaaran. Intaa waxaa dheer, xirmooyinka dhejinta waxay ka go'an yihiin xudunta beddelka. Kuwani sidoo kale waxay leeyihiin dareemayaasha heerkulka gudaha ku jira, waxayna leeyihiin heer sanqadh hooseeya. Waxay isticmaashaa weji iyo dhexdhexaad ah, oo leh koronto gelineed 220V ama 230V guud ahaan.
Triphasic: waxa kale oo ay leedahay qaab dhismeed la mid ah hal-waji, laakiin kiiskan oo loogu talagalay rakibaadda saddexda weji. Taasi waa, hal-weji waxay ku badan yihiin codsiyada gudaha, halka rakibaadda saddex-waji ah guud ahaan laga helo warshadaha ama rakibaadda ganacsiga. Rakibaadahani ma laha hal weji iyo hal xadhig oo dhexdhexaad ah, laakiin waxay u qaybsan yihiin saddex wareeg ama weji kala duwan si ay u qaybsadaan awoodda rakibidda. Xaaladdan oo kale, waxay badanaa taageeraan 380 ama 480V.
Faa'iidooyinka transformer-ka go'doominta
Lahaanshaha transformer-ka go'doominta waxay yeelan kartaa taxane ah faa'iidooyinka Ku rakibida korantada, sida:
Waxay lagama maarmaan u yihiin inay ka difaacaan qulqulka korantada, tusaale ahaan, si looga ilaaliyo shoog koronto.
Waxay hubinayaan helitaanka sahay koronto oo ilaalinaya rakibidda. Waxay ku habboon yihiin rakibaadda helitaanka sare.
Khasaareheedu wuu ka hooseeyaa kuwa noocyada kale ee transformers.
Waxaa lagu naqshadeeyay oo lagu soo saaray dhowr lakab oo dahaar la xoojiyay, kaas oo siinaya adkeyn iyo badbaado weyn.
Codsiyada beddelka badbaadada
Haddii aad la yaabban tahay codsiyada noocaan ah go'doomin ama bedbaadada transformer, waxa ay ku jiraan qalabyo iyo qalab koronto oo badan. Tusaale ahaan:
Si aad shaqaalaha uga ilaaliso shoog koronto. Labadaba tas-hiilaadka warshadaha iyo tas-hiilaadka madaniga ah iyagoo isticmaalaya saddex weji iyo hal waji.
Ilaha korantada qaarkood ee qalabka xasaasiga ah.
Mashiinnada qolka qalliinka jilicsan.
Qalabka shaybaadhka iyo qalabka saadka korantada qaarkood ee aqoon-is-weydaarsiyada elegtarooniga ah.
Sida shaandhada dhawaaqa korantada, ka soocida wax soo saarka.
Xaqiiqdu waxay tahay in xulashooyinku aad u kala duwan yihiin.
Halkee laga iibsan karaa transformer-ka go'doonsan
Hadaad raadineyso a transformer-ka go'doominta qiimo fiican, waxaad haysataa fursado kala duwan, oo ay ka mid yihiin, mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa in laga raadiyo goobta iibka ee Amazon. Tusaale ahaan, waa kuwan talooyin:
Akozon Transformers gaar ah codsiyada maqalka. Waxaa jira 10 qaybood, waxayna kala yihiin 1: 1.
Kala soocida ZCX 1: 1, oo leh 220V wax soo saar iyo 220V. Waxay taageertaa ilaa 10W.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Go'doominta transformer: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Raspberry Pi Zero 2W: ka cusub ee Raspberry Pi